Moto 360, zahanay ho anao | Androidsis
Alfonso de Frutos | | IFA, Lenovo, hevitra, SmartWatch
Tsiambaratelo misokatra iray i Lenovo fa hampiditra kinova vaovao an'ny Moto 360 malaza izy. Na dia marina aza fa fitaovana nandrasana izy io, tsy midika izany fa tsy nahasarika ny besinimaro. Ary tsy maintsy ekena fa ny mpanamboatra Vitany ny nanaitra anay tamin'ny Moto 360 vaovao.
Hanombohana azy, ny Moto 360 vaovao dia manana endrika mahaliana kokoa, ankoatry ny fikirakirana efatra samihafa izay miompana amin'ny mombamomba azy samy hafa. Nandinika ny maodely tamin'ny tontolon'ny 46 mm ary ireo no fiheverana video anay.
1 Ny famolavolana indray no teboka matanjaka an'ny Moto 360
2 Toetra mampiavaka ny Moto 360
Ny famolavolana indray no teboka matanjaka an'ny Moto 360
Raha nisy zavatra nahavita tena tsara dia nisy Lenovo mamerina mamorona ny famolavolana Moto 360. Ilay mpanamboatra aziatika dia nahavita nanaitra anay indray tamin'ny fampidirana andian-fanovana tena mahaliana.
Hanombohana dia hanana ny fahafaha-manao amboary ny famatsiam-baravarana araka ny itiavanao azy noho ny kofehy maro be misy. Amin'ity lafiny ity MotoMaker dia hahafaly ny mpampiasa, fa manomana ny poketra satria miankina amin'ny fomba fanamafisanao ny Moto 360 anao izany, dia afaka mivoaka amin'ny tampony tsara izy.
Ny antsipiriany iray hafa dia miaraka amin'ny famolavolana ny tarehin'ny famantaranandro. Ary ve ny Moto 360 vaovao dia manana bokotra ara-batana amin'ny ilany ankavanana, toy ny maodely teo aloha, fa amin'ity tranga ity dia nampiakarin-dry zareo kely izy io mba hahatonga ny fampiasana azy ho milamina kokoa mijery tena marina kokoa amin'ny smartwatch Lenovo.
Toetra mampiavaka ny Moto 360
Efa nolazaiko taminao fa misy configurations maromaro, na dia somary miovaova kely aza ny lafiny ara-teknika: ny haben'ny dial sy ny zava-misy fa ny maodely Sport dia mampiditra rafitra GPS. Ho an'ny ambiny dia hitantsika a Miantso 46 na 42 mm Izy io dia mahatratra ny vahaolana 360 x 330 ho an'ny maodely 46 mm ary 360 x 325 ho an'ny kinova miaraka amin'ny sehatra kely indrindra.
Ny Moto 360 vaovao dia mampiditra mpanamory Qualcomm Snapdragon 400 miaraka amin'ny RAM 512MB sy tahiry anatiny 4GB. Ankafizinay fa nampiasa SoC somary vaovao kokoa izy ireo ary hita amin'ny fampisehoana izany.
Mampalahelo fa niverina izy ireo mampiasa sensor. Tsy hevitra ratsy izany satria manatsara ny fahafahan'ny famantaranandro, fa naverin'izy ireo tamin'ny toerana iray ihany, mamaky ny famolavolana ny dial, dia tsy azo avela.
Tsy misy holazaina momba ny Android Wear izay tsy fantatrao: rafitra iray ahazoana aina sy azo tantanana izay mihoatra ny fanatanterahana ny iraka ampanaovina azy. Ao anatiny Moto 360 mandeha tsara sy haingana manao ny traikefa nahafinaritra kokoa noho ny modely hafa.
Tsotra be ny fehin-kevitro: Motorola dia nanao asa lehibe indray tamin'ny resaka famolavolanaRatsy loatra amin'ny sensor sensor, ary tsara kokoa noho ny teo alohany ara-teknika.
Ankehitriny dia tsy maintsy miandry isika hanao a famakafakana maharitra kokoa izay ahitantsika ny fomba fihetsiky ny baterinao, singa lehibe indrindra amin'ny famantaranandro an'ity karazana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Moto 360, ireto ny fientanam-ponay taorian'ny fitsapana azy tao amin'ny IFA 2015